Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya: Ma jiro muwaadin laga helay Ebola – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya: Ma jiro muwaadin laga helay Ebola
3rd January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Wasaaradda Caafimaadka oo baaritaan ku sameysay muwaadin Soomaali ah oo Warbaahinta qaar ay ku sheegeen in uu qabo cudurka Ebola kana yimid dalka Guinea ayaa la tilmaamay in muwaadinkaasi uusan qabin cudurka lagu sheegay.
War-saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda caafimaadka ayaa lagu xasuy in Cabdiqaadir Jiinow Barrow oo ah muwaadinka ka yimid dalka Guinea, uusan qabin cudurka Ebola, isla markaana ay saxaafadda qaar ka been abuurteen, waxaana qoraalka lagu sheegay in Cabdiqaadir uu socdaal ku soo maray dalalka Morocco iyo Turkey, halkaas oo uu baaritaan caafimaad lagu soo marsiiyay.
Dr Yaasiin Nuur Axmed oo ka mid ah dhaqaatiirta ay Wasaaraddu u wakiilatay in ay baaritaan ku sameyso muwaadinka ayaa sheegay in Cabdiqaadir uusan qabin cudurka lagu sheegay, waxaana uu tilmaamay in muwaadinkaas laga been abuurtay.
Ku-simaha Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Dr Cabdiqani Sheekh Cumar ayaa sheegay in idaacad ka mid ah idaacadaha maxaliga ah ay sheegeen in uu jiro muwaadin qaba cudurka, waxaana uu intaa ku daray in muwaadinkaasi uu caafimaad taam ah qabo,
“Wasaaraddu waxa ay kulan deg deg ah la qaadatay saraakiil ka tirsan Hay’adda caafimaadka Adduunka ee WHO, intaas kaddib waxaa guddi caafimaad u dirnay halka uu muwaadinka ku noolyahay ee ah Buulo Shareey ee deegaanka Warmaxan, waana lagu guuleystay warkii been abuurka ahaa ee laga sheegay muwaadinka”.
Siihayaha Wasiirka Caafimaadka ee Soomaaliya Cali Maxamuud “Cali Xareed” ayaa shaaciyay in Soomaaliya aysan ka jirin kiiska cudurka Ebola, waxaana uu Wasaaradda Cadaaladda iyo hay’adaha amniga ka codsaday inay baaritaanno ku sameeyeen Idaacadii warka been abuurka ah faafisay, si sharciga loola tiigsado.
Maamulka Puntland oo dib u bilaabaya baarsita shidaalka
Shariif Xasan oo magacaabay wasiiro aad u farbadan (Akhri magacyada)